Ny fototry ny atidoha Ny fitsaboana ny atin'ny olombelona | Valin'ny Fanamarinana
Raha vao teraka isika miaraka amin'ny boky torolàlana momba ny inona no mahatonga antsika hifantina! Ny vaovao tsara dia hoe, tsy dia tara loatra ny mianatra. Zavatra sarotra izany, saingy toy ny fiara dia tsy mila mahafantatra ny zava-drehetra momba ilay motera isika mba hianatra ny fomba handosirana azy io.
Ny sary vetaveta amin'ny Internet dia tsy toy ny pôrnôgrafia tamin'ny lasa. Misy fiantraikany eo amin'ny atidoha izany. Ny lahatsary fohy voalohany dia manazava ny fomba. Maka ny fahadisoan'izy ireo amin'ny resaka izy ireo amin'ny alalan'ny fanazavana ny maha-mora indrindra ny atidoha, indrindra fa ny atidoha adolescent, dia ny hamahanana ny fialam-boly mampientanentana izay manenika ny tontolo iainantsika sy ny kolontsaintsika.
Ity lahateny TED 4 minitra antsoina hoe TED antsoina hoe "Ny famoizana ny lehilahy"Avy amin'ny profesora Stanford Philip Zimbardo dia mijery ny fiankinan-doha amin'ny fanambadiana.
"The Great Porn Experiment”Dia lahateny TEDx 16 minitra nataon'ny mpampianatra siansa teo aloha Gary Wilson, izay mamaly ny fanamby napetrak'i Zimbardo. Nijery maherin'ny 11.7 tapitrisa tao amin'ny YouTube izy io ary nadika tamin'ny fiteny 18.
Nanavao ny lahatenin'i TEDx tamin'ny fampisehoana lava kokoa i 1 (10 ora XNUMX min) antsoina hoe “Ny atidohanao amin'ny pôrnô-Ahoana ny fiantraikan'ny Internet Porno ny atidohanao". Ho an'ireo izay tia boky manintona sy mampahalala dia jereo ny an'i Gary Ny atidohanao amin'ny pôrnô: Pornografie amin'ny Internet ary ny firoboroboan'ny fiankinan-doha azo alaina amin'ny paperback, amin'ny audio na amin'ny Kindle. Ny fanontana farany dia misy sombin-kevitra momba ny fanasokajiana iraisam-pirenena momba ny aretina (ICD-11) an'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (ICD-XNUMX) izay manome fitiliana vaovao momba ny 'aretina miteraka firaisana ara-nofo mahatsiravina' voalohany.
Inona no mahasamihafa ny fahafinaretana sy ny fahasambarana ary maninona no maninona? Jereo ity horonantsary tsara antsoina hoe “Famakiana ny hevitry ny Amerikana: ny Siansa ao ambadiky ny fikarakarana ara-bola ny vatantsika sy ny atidoha”Avy amin'ny dokotera neuroendocrinology Dr Robert Lustig hahitana ny antony. (32 min 42 seg)
Ao amin'ity fizarana 'ifotoran'ny ati-doha' ity dia mitondra anao hitsidika ny ati-dohan'olombelona ny Reward Foundation. Ny ati-doha dia nivoatra hanampy antsika velona sy velona. Milanja manodidina ny 1.3kg (efa ho 3lbs), ny atidohan'olombelona dia mahavita 2% fotsiny amin'ny lanjan'ny vatana, fa mampiasa ny 20% -n'ny heriny.
Mba hahalalanao ny fomba niovaovan'ny ati-doha amin'ny lafiny ankapobeny, jereo ny evolutionary development of the brain. Avy eo dia ho hitantsika ny fiarahan'ireo faritra ireo amin'ny fizahana ireo fitsipiky ny neuroplasticity, izany no fomba ianarantsika sy iankinan'ny aina, anisan'izany ny famoronana fiankinan-doha. Hojerentsika ihany koa ny fomba fifandraisana amin'ny atidoha, ny fitiavana ary ny firaisana amin'ny alàlan'ny fototra neurochemicals. Mba hahatakarana ny antony itosahana antsika handray ireo valisoa ireo dia zava-dehibe ny fahalalana momba ny valisoa. Nahoana ny vanim-potoanan'ny taonan'ny tanora no be trotraka, mahafinaritra ary mampikorontan-tsaina? Fantaro bebe kokoa momba ny adolescent adolescent.